20 000 ton Organic Fatịlaịza Production Line - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Fatịlaịza Organic bụ fatịlaịza sitere na anụ ụlọ na anụ ọkụkọ anụ ọkụkọ na mkpofu ahịhịa site na gbaa ụka dị elu, nke dị oke irè maka mmelite ala na ntinye fatịlaịza. Enwere ike iji fatịlaịza nke ahịhịa metro, ihe mkpofu ugbo, anụ ụlọ na anụ ọkụkọ na mkpofu obodo. Ekwesiri ka emeghari ahihia ahihia ndia tupu emegharia ya na nri ndi ahia nke ahia.
Ntinye ego nke ịtụgharị ihe mkpoba n'ime akụ bara uru.
Ekwentị: + 86-13901833873
A na-ekekarị ahịhịa ndị na-emepụta fatịlaịza na nhazi na granulation.
Ngwa akụrụngwa dị na ọkwa mmalite bụ igwe tụgharịa. Ka ọ dị ugbu a, e nwere ebe atọ a na-atụfu ekpofu: ọkpọkọ ahịhịa na-ehicha, ndozi ije na igwe hydraulic. Ha nwere njirimara dị iche iche ma nwee ike ịhọrọ dịka mkpa ha si dị.
Na usoro nke granulation technology, anyị nwere ọtụtụ granulators, dị ka rotary drum granulators, ndị pụrụ iche granulators ọhụrụ organic fatịlaịza, disk granulators, okpukpu abụọ helix extrusion granulators, wdg Ha nwere ike izute ina maka elu-ekwenye ekwenye na environmentally friendly organic fatịlaịza. mmepụta
Ebumnuche anyị bụ ịnye ndị ahịa ụzọ kacha mma na gburugburu ebe obibi, nke nwere ike ikpokọta ahịhịa na-emepụta fatịlaịza na tọn 20,000, tọn 30,000, ma ọ bụ tọn 50,000 ma ọ bụ karịa ikike ikike dị ka mkpa mmepụta chọrọ si dị.
Organic fatịlaịza mmepụta akara tumadi mejupụtara dumper, crusher, igwekota, granulation igwe, draya, obi jụrụ igwe, echetakwa igwe, wrapper, akpaka nkwakọ igwe na ngwaọrụ ndị ọzọ.
►O doro anya na uru gburugburu ebe obibi
Ahịhịa Organic fatịlaịza na-ebupụta kwa afọ nke tọn 20,000, na-ewere nsị anụ ụlọ dị ka ihe atụ, ọnụọgụ mmịpụ kwa afọ nwere ike iru mita cubic 80,000.
►Realizable akụ mgbake
Were anụ ụlọ na nsị anụ ọkụkụ dị ka ihe atụ, nsị kwa afọ nke ezi na mgbakwunye ndị ọzọ nwere ike mepụta kilogram 2,000 ruo 2,500 nke fatịlaịza organic dị elu, nke nwere 11% na 12% okwu ndu (0.45% nitrogen, 0.19% phosphorus pentaoxide, 0.6 % potassium chloride, wdg), nke nwere ike igboju acre. Fatịlaịza ina-achọ ihe akụrụngwa n'ime afọ.
Organic fatịlaịza ahụ mepụtara na organic fatịlaịza mmepụta akara ndị nitrogen, site, potassium na ndị ọzọ nri, na a ọdịnaya nke ihe karịrị 6%. Ọdịnaya ya dị karịa 35%, nke dị elu karịa ọkwa mba.
►Ọtụtụ uru akụ na ụba
A na-ejikarị ahịhịa fatịlaịza a na-akọkarị na ala ubi, osisi mkpụrụ osisi, ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ, ahịhịa ndị dị elu, mmezi ala na mpaghara ndị ọzọ, nke nwere ike izute mkpa maka fatịlaịza organic na ahịa mpaghara na gburugburu, ma mepụta ezigbo uru akụ na ụba.
1. Gbaa ụka
Gbaa ụka nke ihe ndị na-eme ka ihe na-emepụta ndụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na usoro mmepụta nke fatịlaịza organic. Azụ ụka zuru ezu bụ ihe ndabere maka ịmepụta fatịlaịza organic dị elu. Ndị a tụbara aha ha n’elu nwere uru nke ha. Ndị na-ekpofu mmiri na hydraulic nwere ike nweta nsị zuru ezu nke composting, ma nwee ike nweta oke nchịkọta na gbaa ụka, na nnukwu ikike mmepụta. Ije ije dumper na haịdrọlik tụgharịa igwe ndị kwesịrị ekwesị maka nile di iche iche nke organic ngwaọrụ, nke nwere ike na-arụ ọrụ kpamkpam n'ime na n'èzí ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ukwuu rụọ ọrụ na-agba nke aerobic gbaa ụka.
Ọkara mmiri wuru crusher emepụta site anyị factory bụ a ọhụrụ ụdị nke elu-arụmọrụ otu crusher, nke bụ ukwuu mgbanwe na organic ihe na elu mmiri ọdịnaya. Ọkara iru mmiri ihe crusher na ọtụtụ-eji organic fatịlaịza mmepụta, nke nwere ezigbo ndinuak utịp ke mmiri ngwaọrụ dị ka ọkụkọ nri na sludge. Igwe na-egwe ọka na-ebelata usoro mmepụta nke fatịlaịza organic ma na-echekwa mmefu mmepụta.
Mgbe akụrụngwa na-echi ọnụ n'ala, agwakọta ya na ndị ọzọ inyeaka ihe na kpaliri evenly ka granulation. A na-ejikarị igwe ihe eji eme ihe okpukpu abụọ eme ihe maka hydration na ịgwakọta ihe ndị na-eme ntụ. Ntughari gburugburu nwere ọtụtụ akụkụ. N'agbanyeghị ụdị, nha na njupụta nke agụba, a ga - agwakọta ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Usoro granulation bụ akụkụ bụ isi nke ahịhịa na-emepụta fatịlaịza. Ọhụrụ fatịlaịza granulator na-enweta akwa granulation dị elu site na-aga n'ihu na-akpali akpali, nkukota, Mozis, sphericalization, granulation na usoro dị ukwuu, na ịdị ọcha nke organic nwere ike ịdị elu dị ka 100%.
5. Akọrọ na jụụ
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-agbapụ ọkụ ọkụ na ikpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na imi imi na ọdụ nke injin ahụ site na fan ahụ arụnyere na ọdụ nke igwe ahụ, nke mere na ihe ahụ na-ekpo ọkụ na ikuku ọkụ ma belata mmiri ahụ ọdịnaya nke ahụ.
Igwe na-ajụ oyi na-eme ka ahụ dị jụụ na oke okpomọkụ mgbe ihicha. Mgbe ị na-ebelata mkpụrụ ahụ, enwere ike ibelata mmiri nke ihe ndị ahụ, ihe dị ka 3% nke mmiri nwere ike wepu site na usoro jụrụ oyi.
Mgbe obi jụrụ, a ka nwere ihe ndị na-eme ka ihe dị na ngwaahịa mechara. Enwere ike ikpuchi ntụ ntụ niile na ihe erughị eru. Mgbe ahụ, ọ na-ebu ya si eriri ebu ka blender na kpaliri ime granulation. Eriri nnukwu irighiri erughị eru tupu a gwerie ya. A na-ebuga ngwaahịa ahụ agwụla na igwe mkpuchi fatịlaịza organic.
7. Nkwakọ ngwaahịa
Nke a bụ usoro mmepụta ikpeazụ. Igwe akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara bụ igwe akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa nke arụpụtara maka imepụta ihe dị iche iche. Usoro nrịba ama ya na-egbo mkpa nke uzuzu na mmiri na-enweghị mmiri, yana nwekwara ike hazie igbe dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Adabara nnukwu nkwakọ nke nnukwu ihe, ọ nwere ike na-akpaghị aka itu, ibuga na akara akpa.